Nezvedu - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd.
Shenzhen Joint Technology Co, Ltd.
unyanzvi muR & D uye kugadzira muforoma kugadzira uye michina zvikamu kugadzira michina, isu yakatanga yepamusoro uye yepamusorosoro tsvakurudzo, budiriro, kugadzira, basa chikwata uye manejimendi hurongwa, uye vakawedzera zvigadzirwa kune dzinopfuura 11 dzakatevedzana kubva azvikuya michina, kuti muchina pakati, zvemaziso arm, michina. Iine yakasarudzika mhando yezvigadzirwa uye yakasarudzika mhando zita, zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kumaguta anopfuura makumi mana akagadzirwa kwese pamusoro peChina, uyezve kune nyika dzinopfuura makumi maviri pasirese pasire Asia, Europe neAmerica.
Kambani yedu inotora yakakwira mhando chigadzirwa sekutungamira, R & D mazano ndeekupa vatengi neyakakodzera mhando zvigadzirwa, yakave nyanzvi muchina chishandiso chigadziri ine yakakwana chigadzirwa mutsara weforoma uye zvikamu kugadzira muchina chishandiso uye yakasimba yakashongedzwa-yakagadzirirwa dhizaini kugona muChina .
● Hunhu mukana: akaomarara uye akajeka mhando kudzora maitiro uye kuongorora mashandiro mashandiro, yakakwira standard yekugadzira tekinoroji, yepasi rose yepamusoro kuona software uye Hardware - kuona kugadzikana kupihwa kwakatsiga kwezvakanaka zvigadzirwa.
● Zvakanakira kutsvagisa nekusimudzira: anopfuura makore makumi maviri ekuomerera pakadzika-tsvagurudzo uye tekinoroji kunaya - kwakagadzira hunhu hunoita mashandiro emidziyo zvirinani, gadzirisa zvishandiso nekukurumidza uye nenzira kwayo, uye zvinopa michina nekushandisa mhinduro dzakazara.
Invention patent, utility modhi patent, software copyright gumi nemaviri
● ERP, CRM uye nehumwe hwakazara manejimendi manejimendi manejimendi - kuona kuti mashandiro anoita bhizinesi nekuvandudza kunoramba kuripo.
Ipai vatengi zvigadzirwa zvinoshanda zvakagadzirwa
Ipai vatengi neshanduro yehunyanzvi rutsigiro rweCCC zvigadzirwa, kusanganisira chigadzirwa proofing, kugadzirisa maitiro chirongwa, yechigarire dhizaini uye kugadzira.
zvinopa vatengi vane chakuvhuvhu kana zvikamu kugadzira yose chirimwa michina enzanirana chirongwa, kusanganisira zvikamu kugadzirisa kurova hurongwa, michina enzanirana.
Ipai vatengi mhinduro dzakabatana dzemitsetse yekugadzira yakazvimiririra, kusanganisira michina yekushandisa, kurodha uye kudzikisa otomatiki, uye zvinhu zvekufambisa otomatiki.